Musharax Madaxwayne Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. – idalenews.com
Musharax Madaxwayne Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Anigaoo ah muwaadin Soomaali kana soo jeeda degaanka Koonfur Galbeed Soomaalia, Ka dib markaa aan texgayey; taladii iyo dheerigalinta odayaasha dhaqanka sida malaaqyada, haweenka, dhalinyarada, siyaasiyiintii hore, wax-garadka, culumaawadiinta, iyo aqoonyahanada beesha, waxaa go’aansadey kuna faraxsanahay in aan idin soo gudbiyo taariikh nololeedkeyga (CV) iyo arji ku codsanayo in aan ka mid noqdo musharaxiinta Madaxwaynaha Dowladd Goboleedka Goonfur Galbeed Soomaaliya.
Musharax Madaxweyne Eng.Salah Shek Osman oo ku dhashay Degmada Afgoi sanadkii 1957 ayaa Waxbarashadiisa dugsiga hoose,dhexe iyo sare wuxuu ku dhamaystay degmada MERKA ee Gobolka Shabeelda Hosesanadkii 1977-kii.
Sanadkii 1985-dii eng.Salah waxuu deeg waxbarasho Jaamacadeed ka heley Dawlada Taliyaania 1990-kii wuxuuna Shahaadada Master’s Degree of Engineering:
1-Waxuu ka mid ahaa Asasyadhii SDM, waxuu AfhyeynaSDM 1987/2000
1992-1995, waxaan door wayne ka soo qaatay badbaadinta, daryeelka iyo gargaarka bulshada xiligii abaarta iyo dhibaatada ka jirtay gobolada koonfur Soomaaliya, iyo mashaariicda horumariinta, xiriirka hay’ada caalimiga iyo masuulinta, nabadgelyada iyo xasiloonida.
Howlaha kor ku soo sheegay waxaan ka soo kasbaday waay-aragnimo maamuul, maareynta, siyaasada guddaha iyo dibeda, hogaan, horumariinta bulshada, gurmadka deg-deg, abuurid ilo dhaqaale, xalinta dhibaatooyinka bulshada iyo deegaanka, iwm.
Waxaan si dhab oo shaki ku jiran u aaminsanahay hergelinta iyo adkeenta cadaalada/sinaanta iyo daryeelaka diinta, danta guud, dadka, dalka, iyo deegaanka. Waxaan rumaysanahay wada-tashi, wada-shaqayn, kala-dambayn, howl aan xagar laheyn, iyo daacadnimo, iyadoo nabagelyo iyo xasilooni lagu gaari karo horumar iyo barwaaqo.
Waxaan aaminsanahay in aan ahay musharaxa ku haboon xilka madaxnimada Dowladda Koonfur Galbeed Soomaliya, gudan karo masuuliyada iyo waajibaadka saran, sida ku cad taariikh noolaleedkayga (Resume/CV), anigoo aaminsan in aan aan buuxin karo shuruudaha la soo bandhigya. Waxaan ku rajo waynahay in aad tex-gelin gaar ah siin doontaan codsigayga ama arjigayga.
Eng.Salah Sheik Osman
Dardaaran Kuwajahan Odayaasha Dooranayo Madaxweynaha Koonfur-Galbeed Soomaaliya Iyo Musharixiinta Koonfur-Galbeed Soomaaliya.
Maamulka Degmada Warta Nabadda oo codsaday in lagu gacansiiyo ammaanka Degmadaasi